Yangon Cleaning Service - EasyAds Myanmar
Cars & SUV’s
Farm Land & Empty Stands
Houses, Condo’s & Apartments
AC’s & Fans
Laundry Machines & Dryers
Stove’s & Burner’s
Drivers & Taxi Services
Health, Beauty & Spa Services
Gardening & Pool Services
Plumbing & Other Household Services
Yangon Cleaning Service
စြေးနှုနျး : Free
Date : 04/17/2021
Condition : New/အသဈ
တညျနရော : North Okkalapa
We provideavariety of cleaning services such as cleaning, re-opening and cleaning the office, daily cleaning, deep cleaning and more with professional and reliable staff. … 😎
Cleaning services such as house cleaning, re-opening office cleaning, daily cleaning, deep cleaning, carpet cleaning, sofa cleaning, MattressCleaning, ironing cleaning and more. We provideavariety of services with professional and trusted staff. Book now … 😎
Whatapp app 09693247489
သန့်ရှင်းရေးစက်များနဲ့ အသေးစိတ် တစ်ထောင့်မကျန် ဖွေးသန့်သွားစေမယ့်…. အိမ်အပြောင်း အရွှေ့သန့်ရှင်းရေး.. ရုံးပြန်အဖွင့် သန့်ရှင်းရေး… နေ့စဥ◌်ပုံမှန် သန့်ရှင်းရေး… Deep Cleaning သန့်ရှင်းရေး စတဲ့ သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှု အမျိုးမျိုးကို ပ​ရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျကျ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ဝန်ထမ်းများနဲ့ ဝန်​ဆောင်မှုပေး​နေပါတယ်​နော်… ခုပဲ Booking တင်လိုက်​တော့… 😎
သန့်ရှင်းရေးစက်များနဲ့ အသေးစိတ် တစ်ထောင့်မကျန် ဖွေးသန့်သွားစေမယ့်…. အိမ်အပြောင်း အရွှေ့သန့်ရှင်းရေး.. ရုံးပြန်အဖွင့် သန့်ရှင်းရေး… နေ့စဥ◌်ပုံမှန် သန့်ရှင်းရေး… Deep Cleaning…Carpet Cleaning…Sofa Cleaning…MattressCleaning…ironing oန်​ဆောင်မူသန့်ရှင်းရေး စတဲ့ သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှု အမျိုးမျိုးကို ပ​ရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျကျ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ဝန်ထမ်းများနဲ့ ဝန်​ဆောင်မှုပေး​နေပါတယ်​နော်… ခုပဲ Booking တင်လိုက်​တော့… 😎
☎️ Whatapp app 09693247489
Avoid online transactions
Posted on: 05/03/2022
Posted on: 02/25/2022
Construction & Building ServicesServices
20,000 Kyat (on_call)
20,000 MMK (ညှိနှိုငျး)
Health, Beauty & Spa ServicesServices
Fairy Shampoo and Conditioner 🧴🧴1set 29000 ks . Hair Serum 22000 ks
Body Serum 21000ks နှငျ့ Hair Serum 22000ks
We provideavariety of cleaning services such as cleaning, re-opening and cleaning the office, daily cleaning, deep cleaning and more with professional and reliable staff. … 😎 0️ 09951167699 69️ 09693247489 ………………………………………….. …………….. Cleaning servic...
Spam Offensive Duplicated Fake Scam
Copyright 2022 © EasyAds Myanmar All Rights Reserved.